Nagu saabsan - Jesson Flag Arts & Crafts Co., Ltd.
CFM - SHAAHAD MAALMAD AH
Ganacsi casriyeysan oo loogu talagalay qaabka warshadda ayaa ka dhigaysa daabacaad toos-u-warshad suurtagal ah.
Dalbashada khadka tooska ah ee fudud oo sahlan ayaa kuu badbaadinaysa waqtigaaga iyo lacagtaada iibsashada.
Laga soo bilaabo 2011, CFM waxay diiradda saareysaa xayeysiinta daabacaadda dharka illaa 10 sano.
CFM waa adeeg bixiyahii ugu horreeyay ee ku saleysan internetka ee xayeysiinta daabacaadda dharka ee Shiinaha, iyada oo hoggaanka u haysa horumarinta nidaamka dalabka ee internetka, sameynta aqoon isweydaarsi dijitaal ah iyo in lagu gaaro "la shaqeynta dad yar laakiin leh awood wax soo saar sarreysa".
Iyada oo loo marayo hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda, CFM waxay wax ka beddeleysaa habka dhaqameed ee amarada la dhigo, iyadoo la xaqiijinayo amarrada khadka tooska ah ee nidaamku horay u socdo, iyadoo aan la helin xiriiryo dhexe ama isgaarsiin aan badneyn. B2F-kayaga (ganacsiga ilaa Warshada) habka dalbashada khadka tooska ah wuxuu awood kuu siinayaa inaad ku raaxaysato iibsi fudud, sahlan oo hufan.
CFM waxaa ka go'an inay bixiso alaabooyin tayo leh oo soo bandhiga, waqtiga hogaaminta degdegga ah iyo adeegga macaamiisha oo aan la ilaalin. Alaabtayada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah teendhooyinka daaqada, daboolida miiska, calamada baalasha, bandhigyada dharka, iyo dhamaan noocyada calanka caadada u ah iyo boorarka.
Iyada oo ku saabsan 10 sano oo waayo-aragnimo ah ee soo-saarka dharka, CFM wuxuu ku siinayaa talooyin xirfad-yaqaanno ah, xulashada habka daabacaadda, iyo xalalka bandhigga dhacdada.
Maxaad u dooranaysaa CFM?
Markay dhacdo dhacdo dhacdo, miyaad dhibtoonaysaa inaad qabato waqtiga kama dambaysta ah sababtoo ah waqtiga hogaaminta dheer ee alaabadaada bandhigga ah?
Markii aad wax soo saar ku sameysid gudaha ama aad wax ka iibsatid alaab-qeybiye maxalli ah, miyaad ku dhibaysaa sicirka sarreeya kharashka shaqaalaha ee sarreeya awgood?
Markaad wax ka iibsanayso nin ganacsade ah ama shirkad ganacsi, ma kugu adag tahay inaad hesho qiime tartan oo hubiya tayada wax soo saarka iyo waqtiga hogaaminta?
CFM waxay kaa caawin kartaa inaad xalliso dhibaatooyinka oo dhan hal mar.
24HR Rush Waqtiga Hogaanka La Heli Karo
Alaabta Tayada, Qiimaha Tartan
Adeegga Daabacaadda Toos-to-Warshad
Adeegga Macaamiisha oo aan la keydin
Nidaamkeena xigashada ee 24hr iyo dalabku wuxuu kuu suurta gelinayaa inaad hesho xigashooyin iyo inaad amarro dhigto wakhti kasta, looma baahna inaad ka walwasho farqiga waqtiga, tusaale ahaan, waxaa jira 12-15 saacadood oo farqi u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka. Iyo adeegeena farshaxanka 24Hr iyo adeega daabacaadda 24Hr waa dammaanad qaadkayaga 24Hr waqtiga hogaaminta degdegga ah.
CFM waxay hoos u dhigeysaa qarashkeeda iyadoo loo marayo hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda, taasoo noo saamaxeysa inaan kuu soo bandhigno qiimayaal tartan leh anaga oo aan u hureynin tayada wax soo saarka. Adoo soo bandhigaya nidaam maareyn dhijitaal ah oo loo habeeyay, aqoon isweydaarsigeenu wuxuu u shaqeyn karaa si hufan, xitaa iyadoo ay yar yihiin dadka, weli waxaan ku guuleysan karnaa awood wax soo saar sare. Markaad wax ka iibsaneyso CFM, waxaad had iyo jeer ka heli kartaa alaabooyin tayo leh oo soo bandhiga xitaa iyadoo miisaaniyaddu xaddidan tahay.
Maaddaama nidaamkeenna dalabku ay si aan kala go 'lahayn ugu xiran yihiin nidaamkeenna wax soo saar, marka aad wax ku iibsato khadka tooska ah, waxay ka dhigan tahay inaad si toos ah ula hadlayso aqoon isweydaarsigeenna oo aysan jirin xiriiryo dhexe oo ku lug leh. Dhanka kale, oggolaanshaha farshaxanka khadka tooska ah iyo dabagalka xaaladda amarka khadka tooska ah waa suurtagal. Adeeggeena daabacaadda ee toos-u-warshadaynta kaliya kama dhigi karto shaqadaada mid karti leh laakiin sidoo kale waxay kaa caawin kartaa inaad badbaadiso kharashyada isgaarsiinta.
Intaa intaas kabadan, CFM waxay macaamiisha siisaa taxane ah adeegyo qiimo leh, laga bilaabo bakhaarada USA ilaa taakuleynta suuq geynta, iyo qiime dhimista dhanka saadka ee VIP ilaa xalka koox-iibsashada ee qalabka. CFM ujeedkeedu ma aha oo kaliya inay kuu daabacdo alaabooyinka soo-bandhiga fiican laakiin sidoo kale waxay isku dayeysaa inay u abuurto qiimeyaal badan ganacsigaaga.